Vidim-bary : ATAO IZAY HIROTAHAN’NY VAHOAKA -
AccueilRaharaham-pirenenaVidim-bary : ATAO IZAY HIROTAHAN’NY VAHOAKA
02/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafakatra roa arivo ariary ny kilaon’ny vary gasy fihinan’ny vahoaka madinika. Tsy vitan’ny hoe niakatra ny vidiny fa tena tsy misy vary mihitsy eny amin’ny tsena. Nafenina aiza daholo àry ireny vary ireny ary iza no mahita tombontsoa amin’izany? Rehefa tsy voatarika tamin’ny fidinana an-dalambe intsony ve ny vahoaka dia ny vary foto-tsakafony indray no lalaovina sy atao fitaovana mba hikomiany amin’ny fanjakana? Endrika fanozongozonana fanjakana io fanafenana sy fampiakarana vidim-bary io, ny ain-dehiben’ny vahoaka mantsy no voakitikitika.
Misy mahay milalao io tsinaim-bahoaka io sy ny fanaovana sorona ny ain’ny vahoaka madinika mihitsy eto. Natao avokoa izay fomba nitarihana ny vahoaka hidina an-dalambe nandritra iny taona 2016 iny. Efa nisy mihitsy aza teti-dratsy mba hisian’ny rà mandriaka ary mbola ny vahoaka madinika hatrany no nokasaina hatono tamin’izany saingy tsy nahomby. Toa misy fifandrifian-javatra hafahafa ihany anefa izao fiakaran’ny vidim-bary izao. Betsaka mantsy ireo daty nanamarika zavatra maro teto amin’ny firenena raha tsy hiresaka afa-tsy ny 26 Janoary sy ny 7 Febroary koa mba hamiliviliana ny saim-bahoaka tsy ahatsiaro ireny zava-doza tsy roa aman-tany vitan’ny sasany teto ireny dia natao izay niakaran’ny vidim-bary.
Tsy misy fanazavana mitombina momba izao fiakaran’ny vidim-bary izao mihitsy mantsy azo avy amin’ireny mpivaro-bary ireny. Mazava ho azy fa mifono ambadika politika sy teti-dratsy iniana atao mba hirotahan’ny vahoaka sy hikomiany amin’ny fitondrana no anton’izao fanafenana sy fampiakarana tampoka ny vidim-bary foto-tsakafon’ny vahoaka malagasy izao. Tokony hosaziana mafy tokoa izay rehetra tafiditra amin’izao raharaha izao satria fahavalom-pirenena.